Bathi bazophonsa indle emgwaqeni mabenganakwa | News24
Bathi bazophonsa indle emgwaqeni mabenganakwa
Bekushunqa intuthu ngesikhathi amalunga omphakathi evale umgwaqo.ISITHOMBE: lethiwe makanya
UMPHAKATHI wasendaweni yase-Denmark ka-ward 13 ngaphansi komasipala uMsunduzi ususabise ngokuthi uzothatha indle egcwele ezitamukokweni zayo uyichithe emgwaqeni uma kungukuthi izidingo zabo azilalelwa.
Lo mphakathi udinwe wavala umgwaqo ngamathayi avuthayo ngoLwesibili ntambama ngoba uthi usukhathele ukunukelwa indle. Abagcinanga ngokusabisa ngokuthi bazochitha indle emgwaqeni basabise nangokuthi angeke baze bavote okhethweni lukazwelonke oluzoba ngenyanga kaNhlaba (May) kuwona lo nyaka.
Lama lunga omphakathi akade edinwe egane unwabu athi anenkinga yokushokwa ugesi kanti kwesinye isikhathi kuze kuphele izinsuku bengenawo.Bakhala nangokuthi abasakwazi ukusebenzisa izindlu zabo zangasese ngenxa yokuthi zigcwele kanti nemoto emomayo nayo ayisafiki.
“Sikhathele manje sekwanele. Sikhuluma nje kumanje kunengane esesibhedlela ngemuva kokuba ishokwe ugesi. Abantu bakamasipala bahleli bethi bazofika bazowulungisa kodwa uma befika bafike bavule isigubhu esikhulu kodwa futhi uqhubeke ugesi usilimaze. Kumanje sishelwe izona zonke izinto ezisebenzisa ugesi okubalwa kuzona imisakazo, kanye neziqandisi.,”kusho elinye ilunga lomphakathi elingazange lizidalule igama .
Elinye ilunga lo mphakathi lithe indlela isimo esesisibi ngayo ngodaba lwezindlu zangasese sekunzima nokuthi ungene ubhekile sekuphoqa ukuba ungene uhlehla ngenxa yokugcwala kwawo.
“Ikhansela kade sasilibikela ngalolu daba kanti futhi namanje ngaphambi kokukuba siye emgwaqeni simutshelile samazisa ngokuthi uma zinganakwa izinkinga zethu sizoya emgwaqeni wathi asihambe siye khona. Uma sizama sithi siyobika izinkinga zethu kamasipala sebevele bafike basitshele ukuthi sebekhathele izinkinga zethu.
Asazi ukuthi kanti thina manje kumele sizibikephi izinkinga zethu. Indaba yalogesi iyasithusa ngoba uma ngabe kuqhubeka kanje kuzogcina kuphume isidumbu.”
Ikhansela lakulendawo uNkk Sbongile Mncwango uthe yena ubengazi ukuthi imoto emomayo ayifiki kulendawo. Uthe kunelunga lomphakathi aliqoka walihlanganisa nabantu ababhekelele imoto emomayo kamasipala ukuze kuzoba lula njalo uma ngabe kunenkinga okanye kunabantu abadinga ukumomelwa.
“Indaba yagesi yona iyinkinga ngoba ngemuva kokuba ngithole isikhalazo sokuthi abantu bathi sekuphele izinsuku bengenawo ugesi ngifonele kamasipala ngabuza ukuthi yini imbangela yokuthi abantu bangabi nawo ugesi. Abantu bakamasipala bafikile bawulungisa ugesi kodwa futhi uyaqhubeka uyahlupha ngoba iningi labantu banogesi oyizinyokanyoka. Into nje mina esengiyifisa ukuthi umasipala uyibhekisise le ndaba ukuthi kungani ugesi wakulendawo uhleli uhlupha kangaka bese kutholwa umsuka wayo ilungiswe,” kubeka yena.
Uqhube wathi udaba lwesiteleka yena uluzwe kade esemhlanganweni kamasipala.
“NgoMsombuluko ngathola ucingo luphuma kwelinye ilunga lompahakthi elikwikomidi lesikhashana kule ndawo lingitshela ukuthi abanawo ugesi sekuphele izinsuku. Langitshela ukuthi njengoba bengenawo ugesi bazohamba baye emgwaqeni ngabe sengithi mina uma bethi bafuna ukuya emgwaqeni nami ayikho into engizoyenza. Ngokwazi kwami bengizitshela ukuthi ugesi usulungisiwe kanti futhi bengingazitsheli ukuthi baqinisile uma bethi bazoya emgwaqeni,” kubeka yena.